Tirada Dadka Ku Dhintey Dagaalka Mareykanku Uu Argagixisada Kula Jiro Oo La Shaaciyay | Berberatoday.com
Tirada Dadka Ku Dhintey Dagaalka Mareykanku Uu Argagixisada Kula Jiro Oo La Shaaciyay
USA(Berberatoday.com)-Daraasad la baahiyey Khamiistii ayaa sheegtay in dagaalka Mareykanka uu hoggaaminayo ee ka dhanka ah argagixisada uu dad dhan nus milyan qof ku dilay dalalka Afghanistan, Iraq iyo Pakistan, 17-kii sano ee tegay.
Darasadda ayaa sidoo kale sheegtay in labadii sano ee tagay ay dhimashada korortay 22 boqolkiiba.
Dhimashada ayaa waxaa qeyb ka ah ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisa, dad shacab ah, ciidamada milatariga iyo booliska saddex dal, iyo mintidiinta, sida ay sheegtay daraasadda oo ay sameysay jaamacadda Brown, mashruuceeda qiimaha dagaalka.
Warbixinta ayaa sheegtay in tirada dhimashada aan tooska ahayn ay dhowr jeer ka badan tahay tan tooska ah ee dagaalka uu sababay, ayna gaadheyso in ka badan hal milyan oo qof.
Dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 147,000 oo qof, oo 6,334 ka mid ah ay yihiin ciidamada Mareykanka iyo qanderaaslayaashooda, halka dalka ay deriska yihiin ee Pakistan uu khasaaraha dhimasho yahay 65 kun oo qof.
Tirada soo hadhtay ee dhimashada oo u dhaxeysa 268,000 iyo 295,000 ayaa ka dhacday dalka Iraq, oo ciidamada Mareykanka ay galeen sanaddii 2003.